MM27 usoro curtain usoro Factory - China MM27 usoro curved Manufacturers, Suppliers
A na-akwado ihe ngosi FHD n'ụzọ dị egwu site na ngwa ngwa 165hz na-agba ume iji hụ na usoro ngwa ngwa na-apụta dị nro na nkọwa zuru ezu, na-enye gị ihe agbakwunyere mgbe ị na-egwu egwu. Ma, ọ bụrụ na inwetara kaadi kaadị AMD dakọtara, mgbe ahụ ị nwere ike iji teknụzụ FreeSync wuru nke nyocha ahụ kpochapụ anya mmiri na nsị mgbe ị na-egwu egwu. Ga-enwe ike ijide marathons ọ bụla na-egwu abalị, ebe nyocha ahụ na-egosipụta ọnọdụ ihuenyo nke na-ebelata nsị ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma na-enyere aka igbochi ike ọgwụgwụ anya.
Ihe ngosi QHD na-akwado nke ọma site na ngwa ngwa 165hz na-agba ume iji hụ na usoro na-agagharị ngwa ngwa pụtara dị nwayọ na nkọwa zuru ezu, na-enye gị ihe agbakwunyere mgbe ị na-egwu egwu. Ma, ọ bụrụ na inwetara kaadi kaadị AMD dakọtara, mgbe ahụ ị nwere ike iji teknụzụ FreeSync wuru nke nyocha ahụ kpochapụ anya mmiri na nsị mgbe ị na-egwu egwu. Ga-enwe ike ijide marathons ọ bụla na-egwu abalị, ebe nyocha ahụ na-egosipụta ọnọdụ ihuenyo nke na-ebelata nsị ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma na-enyere aka igbochi ike ọgwụgwụ anya.